Indasitiri yeMotokari - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
Kugadziridza kwemechani zvikamu chikamu chakakosha cheiyo nzira yekufambisa, kunyanya kubvisa kupenya, maburrs, chamfers, machining banga, kuderedza kushata kwemazino, kupurisa kwakanaka, nezvimwewo, hapana mabumps panguva yekubvisa uye kupukuta, uye hapana shanduko mumashini. geometric dimensions yezvikamu uye kurongeka kwepamusoro kweakakandwa mekiniki zvikamu zvinogona kunyatso kuvandudza kunaka kwekutapurirana kwezvikamu zvemakanika uye kuderedza ruzha rwekutapurirana. Inogona kunyatso kuvandudza kunaka kwekutapurirana. Nehunyanzvi gadzirisa matambudziko ehunyanzvi ekubvisa akasiyana akajeka mamechani zvikamu kune angular girazi polishing.
Tsanangudzo yemakanika zvikamu customization ndeiyi:
1. Zvikamu-musanganiswa wezvikamu zvinoona chimwe chiitiko (kana: basa). Chikamu chinogona kuva chikamu chimwe chete kana musanganiswa wezvikamu zvakawanda. Mukubatanidza uku, chikamu chimwe ndicho chikuru, chinoziva chiitiko chakamiswa (kana: basa), uye zvimwe zvikamu zvinongotamba mabasa ekubatsira senge kubatana, kusungira, uye kutungamira.
2. Zvikamu-pasi pezvakajairwa mamiriro ezvinhu, zvese zvikamu uye zvikamu kunze kweiyo furemu zvakabatanidzwa zvinotumidzwa sezvikamu. Zvechokwadi, rack zvakare chikamu.
3. Zvikamu-chikamu chimwe chete chisingagoni kuparadzaniswa.
Maitiro ekugadzirisa maitiro ezvikamu ane zvakanyanya kuomarara zvinodiwa. Kusangwarira kushoma mukugadzirisa kuchaita kuti kukanganisa kwechishandiso chipfuure chiyero chekushivirira, chinoda kugadziridzwa, kana kuzivisa kuti iyo isina chinhu yakaraswa, izvo zvinowedzera mutengo wekugadzira. Naizvozvo, ndezvipi zvinodikanwa zvekunyatso gadzirisa zvikamu zvinogona kutibatsira kuvandudza kugadzirwa kwehunyanzvi. Chekutanga, saizi zvinodiwa zvinofanirwa kugadziriswa zvakanyatsoenderana nechimiro uye chinzvimbo chekushivirira zvinodiwa zvemifananidzo. Kunyangwe saizi yezvikamu zvakagadziriswa nebhizinesi hazvizove zvakangofanana nehukuru hwekudhirowa, saizi chaiyo iri mukati mekushivirira kweiyo theoretical size, uye chigadzirwa chakakodzera uye chikamu chinogona kushandiswa.
Kana iyo workpiece inopinda maitiro ekupedzisa mushure meimwe nguva yenguva, inofanirwa kushandiswa pane yakakwira chaiyo muchina chishandiso, kuitira kuti workpiece iwane yakakwira chaiyo.
Kugadziriswa kwezvikamu kunowanzo sanganisira kurapwa kwepamusoro uye kurapwa kwekupisa, uye kurapwa kwepamusoro kunofanirwa kuiswa mushure mekugadzira machining. Uye mukuita kwekugadzirisa machining, ukobvu hwehutete hwakatsetseka mushure mekurapa kwepamusoro hunofanirwa kutariswa. Kurapa kwekupisa ndiko kuvandudza kushanda kwekucheka kwesimbi, saka inoda kuitwa musati machining.
Customized processing yezvikamu uye zvikamu zvinoteverwa nemidziyo zvinodiwa. Kugadziriswa kwakashata uye kwakanaka kunofanira kuitwa nemichina yekushanda kwakasiyana. Sezvo rough machining process ndeyekucheka zvikamu zvakawanda zvezvisina chinhu, huwandu hukuru hwekushushikana kwemukati huchagadzirwa muworkpiece kana chiyero chekudya chakakura uye kudzika kwekucheka kwakakura, uyezve hapana kupedzisa kunogona kuitwa.
Zvakanakira zvekugadzirisa zveasiri-standard mehendi zvikamu hazvigumire ipapo. Chakanakira sevhisi iyi ndechekuti inogona kuzadzisa zvizere zvinodiwa nevashandisi. Zvishandiso zvakagadziridzwa kuburikidza nezvinodiwa nemushandisi zvinogona kusangana nezvinodiwa zvekugadzira zvemabhizinesi uye kunatsiridza kugadzirwa kwakanaka. Panguva imwecheteyo, chaizvo nekuti michina inogadziriswa nezvinodiwa, mutengo wekuyedza uye mutengo wevashandi uchaderedzwa zvakanyanya, izvo zvinogona kunyatso kudzora mutengo uye kugadzirisa kukwikwidza kwechigadzirwa.
Kugadziridza kweasiri-akajairwa mekiniki zvikamu Iyo yazvino nzanga mudziyo unodzorwa nekupa uye kudiwa, uye zvigadzirwa zvinogadzirwa nemabhizinesi zvinofanirwa kuvandudza hupfumi hwemusika. Kune vagadziri, kuvandudza kugadzirwa kwekugadzira uye kunatsa chigadzirwa kurongedza inzira yekuvandudza kukwikwidza kuburikidza nekuita kwavo. Iyo mukana weiyo isiri-yakajairwa mechanical processing inogadziriswa, iyo inobvumira mabhizinesi kugadzirisa chigadzirwa kurongedza zvakasununguka.
Kurongedza kazhinji kacho maonero emutengi echigadzirwa, uye kunaka kwechigadzirwa kunogona kukanganisa chido chevatengi chekutenga. Mune homogenization yezvinhu, isu tinoda kuita kuti zvigadzirwa zvibude pachena uye nekugadzirisa zvakanakisa chigadzirwa kurongedza.